တောင်ကိုရီးယားက ရေဘ၀ဲ စားသောက်ဖွယ်ရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » တောင်ကိုရီးယားက ရေဘ၀ဲ စားသောက်ဖွယ်ရာ
တောင်ကိုရီးယားက ရေဘ၀ဲ စားသောက်ဖွယ်ရာ
Posted by ဆူး on Oct 3, 2010 in Food, Drink & Recipes, News | 18 comments
တောင်ကိုရီးယားမှာ ရေဘ၀ဲ အရှင်တွေ စားကြတယ်။ ခေတ်စားနေတယ်ဆိုပါတော့ စားရတဲ့ အရသာ ဘယ်လိုရှိလဲတော့ မသိဘူး စားချင်တဲ့ လူတွေရှိရင် စားပုံစားနည်းလေး တင်ပေးလိုက်တယ်။
လူတိုင်းတော့ မစားရဲကြဘူး။ ရေဘ၀ဲ အရှင်လေးကလည်း အသက်လုနေရတော့ အချဉ်ရေနဲ့ တို့ပြီး ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်လည်း သူက လှူပ်နေတယ်လို့ ပြောတယ်။ မြန်မြန်မ၀ါးနိုင်ရင်တော့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်တတ်ပါတယ်။ ၀ါးနေတုန်း အချိန်မှာ ဟိုတိုးဒီတိုးနဲ့.. တွန်းထိုးနေတာ.. နဲနဲတော့ စိတ်လှူပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်။ စားတဲ့လူကတော့ မညက်မချင်း ဖိဝါးနေရတာဘဲလေ။ ၀ါးရင်းနဲ့တော့ ရေဘ၀ဲလေး သေသွားတာပေါ့။ ရေဘ၀ဲလေး ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ တော်တော်ရက်စက်တဲ့ ကိစ္စလေးပါဘဲ။ သနားစရာ ရေဘ၀ဲလေးကို ဂရုဏာ သက်မိပါတယ်။
ဒီလောက် ကြီးတဲ့ ဟာကြီးဆိုရင် လူတွေ အရှင်စားဝါးစားဖို့ ပါးစပ်ဆန့်မှာ မဟုတ်ဘူး
အဲလောက်ကြီးတဲ့အရွယ်တော့ မစားဖူးဘူး။ တ၀က်လောက်သေးတဲ့အကောင်တော့ စားဖူးတယ်။
လေးငါးချက်လောက်ဝါးလိုက်ရင် သေပါတယ်။ အထဲက ပေါက်ထွက်လာတဲ့ အရည်တမျိုးကညှီပေမဲ့ စိမ့်ပြီး အရသာရှိတယ်။
သေနေတဲ့အကောင်တွေက ပုပ်နံ့ ထွက်လာတာမို့ အရှင်ကို အကောင်လိုက်စားကြတာပါ။
မြန်မာပြည်မှာလည်း သင်ပေါင်းပိုးက အစိမ်းလိုက်စားကြတယ်လေ..။
ပြောရရင် ငပိထဲ ဗက်တီးရီးယားမျိုးစုံရှိပါတယ်။ ဗက်တီးရီးယားတွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့ ငပိအစိမ်းစားကြတာဟာ တော်တော်ရက်စက်တဲ့ ကိစ္စလေးပါဘဲ။ သနားစရာ ဗက်တီးရီးယား အကောင်သန်းပေါင်းများစွာကိုရော ဂရုဏာမသက်မိဘူးလား..:)
ဘုန်းကြီးတွေတောင် မျက်စိနဲ့ မြင်တဲ့ အကောင်တွေကို အရှင်မသတ်ရဘူး မျက်စိနဲ့ မြင်တာ မဟုတ်တဲ့ သတ္တ၀ါမို့ စားကောင်းပါတယ်။ သာမာန် ၅ပါးသီလ သာစောင့်တဲ့ လူဖြစ်တဲ့အတွက်.. မမြင်ရတဲ့ ပိုးတွေတော့ ပိုတောင် စားကောင်းမယ်ထင်တာဘဲ။ ငပိတင်မကဘူး ဒိန်ချဉ်မှာလည်း ပိုးတွေ ပေါမှ ပေါ.. သြတိုက်နေတာဘဲ
ဂီဂီ ပြောသလို သဂျီး ၀ဋ်လည်မယ် ဆိုရင် ဟာလာ လုပ်ခံရကိန်း ရှိတာပေါ့။ တွေးတာနဲ့တောင် ကြောက်စရာကြီး။
သဂျီး …ရေဘွဲ ၀ါးစားဒယ်ပေါ့ ဟုတ်စ …
ဘာ …၄-၅ချက်လောက် ၀ါးရင် သေဒယ်ဆိုဘဲ ….
စိမ့်ပီးတောင် အရသာ ရှိသေးဆိုဘဲ …….အင်း ..ဂလောက် အကုသိုလ်ကြီးနေတာ..
သည်မှာ လာနေတုန်းက ဘာလို့ နာမည်ကျော် ဆိုးဘုဆန် နဲ့ ယာမာနိုတယ် ဆန် ဖြတ်တိုက် ခံ မထိတယ်မသိ….
သတိလည်း ထားဦးသဂျီး … …၄-၅ခါ ကြိတ်လှီးရင် သေဘာဒယ် ဆိုတဲ့ လူသားစားဂိုဏ်းတွေရဲ့
ဖောက်သည်မျှော်နေတာနော သဂျီး …
ဟုတ်တယ်လေ. .. မိုက်ခရို စကုတ်ပစ် ခရီအေးချား ကတော့ ထားပါတော့ …
ကဲ… မျက်စိနဲ့ မြင်မှ မမြင်ရဒါ .. ဂလို အသေးစိတ်ပြောကြေးဆို …သတ်သတ်လွတ်သမား
တွေလည်း လွတ်တော့မှာ မဟုတ်ဝူး ..(အပင်ကလည်း သက်ရှိကိုး ခည….)
(၀ီကီ လာပြောနဲ့နော် … ၀ီကီမှာ ရှာ ဖတ်ပီးမှ မန့်တာ….)
ကျုပ်တို့ ဘာသာကတော့ သတ်မစားဘူး …..ပံ့သကူဆို အိုခေ….
(ပေါက်ပေါက်ရှာ ရှာ လာမမန့်နဲ့နော် သဂျီး ….သတ်စားတာနဲ့ ပန့်သကူနဲ့ကြားက ကူလီကူမာတွေ ကို….
ဆြာသမား သိပ်ချစ်တဲ့ ၀ီကီ က ကျုပ် ငယ်ချစ်ဦးပါဂျ. …ဟင်းဟင်း….)
သတ်စားတာတောင် အပြစ်ကြီးလှဘာဘီ ဆို ….. အရှင်ဝါးစားဒဲ့လူအတွက်ကတော့ ဆိုဖွယ်ရာမရှိဘဲ…
စိုးဒယ် စိုးမိဒယ် …စိုးရိမ်မိဒယ်….
(ဖြစ်တွားလည်း တနားဘာဘူး အာဟိ ……)
သဂျီး ကြွက်ပေါက်စရော မစားကြည့်ဘူးလား
ငါးပိရည်နဲ့တို့ပြီးတော့လေ အချိန်ရရင်သဂျီးအတွက် စားကောင်းသောက်ဖွယ်လေးတွေတင်ပေးပါဦးမယ်
သဂျီးက အစားကောင်းဆို စားဖူးတယ် ရှိအောင် စားသင့်တယ် ဆိုတဲ့ လူမျိုး.. အစားနဲ့ ပတ်သတ်ရင် နှလုံးသား မရှိဘူး။
အမယ်လေး လေး လေးငါးချက်ဝါးရင် သေတယ်တဲ့လား…. ဒီမှာလည်း စားကြတာတွေ ရှိကြပါတယ်။ အဲလိုဆိုင်တွေက သိပ်တော့ မရှိဘူး။ တချို့ဆိုင်တွေကတော့ ငါးကန်နဲ့ထားပြီး ရောင်းတာတွေ တွေ့ဖူးတယ်။ မစားရဲပါဘူး။ကြောက်စရာကြီး
မှန်လှပါ ဖုံးဖုံးတို့ဘာယား
ဟုတ်တယ် ပြုတ်ပြီး အချဉ်လေးနဲ့သာ စားလိုက်ရရင် ..ရှယ်ဘဲ ..
ဘီဘီ သမားတွေ အကြိုက်ပေါ့ …
မဆူးကနောက်နေပြန်ဘီ။ ရေဘဝဲ သေးသေးလေးတွေစားတဲ့ပုံလားလို့ ။ ဒါကြီးဆို စားဖို့ မပြောနဲ့သူ့ လိုတောင် မဖက်ရဲဘူး။ သေးသေးလေးလည်းမစားရဲဘူး တော်ကြာလည်ချောင်းမှာ ကပ်နေရင်ဒုက္ခ။ တရုတ်ကဈေးမှာ ကြက်တို့ငါးတို့ ဆို အရှင်တွေ ရောင်းတာ။ ဝယ်လို့ ရှိရင် ကိုယ့်ရှေ့ မှာတင် သတ်ပေးတာ။ အသားငါး စားချင်စိတ်တောင် ပျောက်သွားတယ်။ ငါးဆို အပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်လိုက်တာတောင် သင်္ဘောပေါ်ရောက်တဲ့ထိ အမြီးက ဖလပ်၊ ဖလပ်နဲ့လှုပ်နေသေးတယ်။ ဆိုးတာက ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ ထည့်လာတော့ တစ်လမ်းလုံး ဖလပ်၊ ဖလပ်နဲ့စိတ်ပိန်တယ်
အဲလို အရှင်တွေစားရင် လူ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်လား။
ဒါမှ မဟုတ် အကျိုးပြု နိုင်မလား။
လတ်လေ ကောင်းလေ ပိုချိုလေ ထင်ကြလို့.. လတ်တာ ထက် ပိုလတ်အောင် လုပ်ရင်းနဲ့ အရှင်လတ်လတ် ပါ ၀ါးစားကြတဲ့ အဆင့်ထိ ဖြစ်သွားကြတာ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
မျောက်ဦးနှောက်စားတဲ့ပုံမျိုးလောက် ဘယ်ဟာက ရက်စက်မှာလဲ….။ ဒီထဲမှာလည်း ပြောခဲ့ဖူးတယ်ထင်ပ….။
ရေဘ၀ဲတော့ သဂျီးးလို အစိမ်းမစားရဲဘူး..
မစားဖူးတာတွေ စားရင် ၀မ်းလျှောတတ်တယ်တဲ့..
ပါးစပ်တည့်စမ်းပြီး မစားဖို့.. အကြံပေးပါဒယ်…
တားတားက မချားဘူးဒါဆို ချားဘူး..
ချားဘူးတာလေးတွေဆိုရင် တားမရဆီးမရ မြင်တိုင်း တွေ့တိုင်း နေရာတိုင်း ချားတတ်တယ်မလား …..